Ama-Aries | Januwari 2022
Buyini ubuthakathaka bama-Aries?
Yini umdlalo wothando wama-Aries omuhle kakhulu?
Yini umdlalo wothando wama-Aries omuhle kakhulu? Izimpawu ezihambisana kakhulu nama-Aries ngokuvamile zithathwa njengeGemini, Leo, Sagittarius ne-Aquarius. Izimpawu ezingahambisani kakhulu nama-Aries ngokuvamile zithathwa njengeCancer neCapricorn.
Izongithinta kanjani iMars in Aries? Futhi lapho ingena kusibonakaliso somlilo esiyikhadinali i-Aries, iMars cishe ayinakunqandeka, njengoba ama-Aries abhekwa njengophawu lwasekhaya lomhlaba. Lapho uMars ese-Aries, sonke singalindela ukuzizwa sinesibindi futhi sinesibindi sokushaja siqonde ekuqaleni okusha, sithathe isinyathelo ezimpilweni zethu, futhi sivumele izinkanuko zethu ziholele indlela. 2020.
Kusho ukuthini inyanga entsha ka-Ephreli?
Kusho ukuthini inyanga entsha ka-Ephreli? Kungaphakathi kwenyanga entsha lapho uhloselwe ukusetha inhloso entsha yokukuholela esikhathini esizayo. Kulesi sigaba somjikelezo wenyanga wezinsuku ezingama-28, unikezwa ithuba lokuqala phansi ngakho konke ukuhlakanipha kokuhlangenwe nakho kwakho ngasohlangothini lwakho. Impilo yinqubo eqhubekayo yokwenza amaphutha nokuqala phansi. 2021.
Yini inyanga yama-Aries eyakhanga kuyo?
Yini inyanga yama-Aries eyakhanga kuyo? I-Aries Moon Bathanda kakhulu futhi balangazelela injabulo. Indoda enalesi sibonakaliso senyanga izodonswa ngokushesha kwabesifazane abazimele, abanamandla. Ufuna (futhi uzokwamukela) umuntu omphonsayo. 15. 2020.
Yini indoda yama-Aries efuna ebudlelwaneni?
Yini indoda yama-Aries efuna ebudlelwaneni? Umuntu we-Aries udinga ukulingana ebudlelwaneni Ngenxa yokuthi indoda yama-Aries ithanda ukuhola akusho ukuthi uzoyeka ukuphatha ngaso sonke isikhathi. Khumbula ukuthi indoda yama-Aries ihlala ifuna umlingani olingana naye, okungukuthi ongesabi ukuphikisana noma ukuphikisa umbuzo ngesinqumo. 2019.
Yini owesifazane wama-Aries akhangwa yiyo?
Yini owesifazane wama-Aries akhangwa yiyo? Uhehwa owesilisa ogqoke ngokungenasici, oziphethe kahle futhi ohlonipha abantu besifazane. Ubheka i-knight eqinile emzimbeni nasengqondweni, enobuqotho obungaguquguquki nokuziphatha kanye nomvikeli womuntu ongaphansi. Ukudlala ngothando ngothando owesifazane wase-Aries unothando.
Ingabe kusasa usuku lwenhlanhla ngama-Aries?
Ingabe kusasa usuku lwenhlanhla ngama-Aries? Ama-Aries kusasa inhlanhla ithi njengoba iJupiter izophatha umsebenzi wakho, intuthuko emakethe ingaba khona ngesandla. Ama-Aries kusasa inhlanhla izobashayela ukuthi basebenze kanzima benze ukuxhumana futhi badinge noma baqale ukufuna uhlelo oluthandwayo.
Ingabe ama-Aries athukuthele?
Ingabe ama-Aries athukuthele? Njengoba amaRams ehlala elungele ukulwa, abantu abazalwa ngaphansi kwesibonakaliso sama-Aries bangaba nentukuthelo enkulu. Ama-Aries azodlalela ukunqoba kepha angahle angathathi isikhathi ngaso sonke isikhathi ukuhlola ubungozi nesiyaluyalu abangabhekana naso emsebenzini owunikiwe. 2. 2020.
Ngubani iNyanga yama-Aries ehambisana naye?
Ngubani iNyanga yama-Aries ehambisana naye? I-Aries Moon Uzothola kube lula ukuba ngumuntu odlalayo, oncintisanayo, onamandla nomuntu onenyanga yakhe, ilanga, kanye / noma iVenus futhi kusibonakaliso seRam, noma esinye isibonakaliso somlilo, njengoLeo onekhono noma iSagittarius entsha. .15. 2020.
Yini ama-Aries Suns ahehwa kuyo?
Yini ama-Aries Suns ahehwa kuyo? Uma une-Stellium ngesibonakaliso, njenge-Aries, uzoheha ama-Aries. Lokhu kungaba yi-Aries Sun, Rising noma evelele. Kungase futhi kuhehe iMars, Fire noma ukubusa kwendlu yokuqala. Uma uneStellium endlini, njengendlu yesithathu, uzoheha iGemini. 2017.
Siyini isilwane ama-Aries?
Siyini isilwane ama-Aries? 02 / 13Aries Isilwane sakho somoya yi-Hawk noma i-Falcon. Bangabaholi abazalwa ngokwemvelo abazenzekelayo futhi bahlala bekulungele ukuthatha isinyathelo. Kwesinye isikhathi, bangaba nemicabango, kepha bazohlala bekhombisa ukuzethemba okuphelele. Banothando olukhulu kakhulu futhi bavumelana nezimo. 2021.
Inqama imele ini ngama-Aries?
Inqama imele ini ngama-Aries? Ukwakhiwa kophawu lwenkanyezi yiRami futhi kuhlotshaniswa nendaba yeGolden Fleece ezinganekwaneni zamaGrikhi. Ama-Aries amele umoya wobunye futhi amaRams anamathela kuwo wonke umuntu ifilosofi yabo. Izinqama nazo zizibophezele ngamaphesenti ayi-100 kunoma imuphi umsebenzi eziwenzayo.7. 2020.